'पुरूष प्रधान समाजले महिला प्रतिनिधि स्वीकारेन दिदी'- दुर्गा जयन्तीलाई खुल्ला पत्र - Hamrokhotang
Home » Photo Gallary » Sahitya » 'पुरूष प्रधान समाजले महिला प्रतिनिधि स्वीकारेन दिदी'- दुर्गा जयन्तीलाई खुल्ला पत्र
'पुरूष प्रधान समाजले महिला प्रतिनिधि स्वीकारेन दिदी'- दुर्गा जयन्तीलाई खुल्ला पत्र
By: HamroKhotang.com on Friday, July 07, 2017 /
अादरणिय दिदी ! दुर्गाजयन्ती राई,
नमस्कार, लालसलाम ।
म तपाईकाे शुभचिन्तक/अनुयायी भएकाे नाताले याे खुला पत्र लेख्दैछुु । विशेषत: स्थानिय तह निर्वाचनकाे नतिजा सार्वजनिक भैसकेपछि नगरवासी अाम महिलाकाे हार भएकाे अाभाष भएकाे छ । वास्तविकता अलिक जटिल छ, पुरूष प्रधान हाम्राे समाजले महिला प्रतिनिधि स्विकार्न मन सङ्किर्ण बनाएकै हाे ।
कालाे र धमिला मनका प्रतिनिधिले अवश्यनै तपाईप्रति खाेइराे खनेकै हुन् । अझ पाेथि बासेकाे सुहाउन्न भन्ने हाम्राे समाजकाे विद्यमान कु उखानकाे जालाेले केही नारीविराेधीकाे मन जिति रहेकाे छ । किनकि एक दिनभर तपाई ५०० मतले अगाडि हुँदा नारीविराेधी काे अाेठमुख सुकिरहेकाे मैले प्रत्यक्ष देखेकाे थिए । दुर्गा जयन्तीकाे जमानत जफत हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने, अनेक लाल्छना, जवर्जस्ती अाराेप र दुस्प्रचारका बाबजुत अंकगणितमा तपाईं अब्बल सावित भईसक्नु भाछ । मलाई अचम्म लाग्थ्याे; तपाईले संविधानसभा सदस्य हुदा केही गर्नुभएन भनेर निकै कुरा निस्कन्थे । हाे तपाईले केही गर्नुभएन: खुलेअाम गुण्डागर्दीलाई समाजमा प्रश्रय दिनुभएन, भ्रष्टाचार साथै मानविय तथा सामाजिक दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी दायराबाट बाहिर निकाल्न दवाव दिनुभएन, महिलालाई हुने घरेलु हिंसामा माैन रहन सक्नुभएन, माननीय भैसकेर पनि खाेटाङलाई बिर्सनुभएन हाे तपाईले केही गर्नु भएन ।
अन्ततगत्व, संविधान कार्यान्वयनकाे क्रममा अाफैले उमेद्वारी दिनुभयाे यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ तपाईकाे महानता ! तर कत्तिपयले त, माननियबाट मेयर अब वडाध्यक्ष हुदाहुदै महिला वडासदस्यमा खुम्चिने भईन भनेर खाेइराे खने । यसबाट उनिहरूकाे पुरूषवाद झल्किरहन्थ्याे । जे हाेस बाेल्नेकाे मुख थुन्न नसकिने । जसले जत्तिनै मनका काला विचार प्रस्तुत गरेनि एउटा महिलाकाे सम्मान गर्न सक्ने सपूतले तपाईकाे कदर गर्नेछ ।
दिदी, हाम्राे हारकाे प्रमुख कारक तत्व संगठन कमजाेरनै हाे । कमजाेर उमेदवार उठाएपनि संगठन वलियाे भएमा जित तेतै जादाे रहेछ । हामी सशक्त बन्न सक्ने अाधार धेरै छन् मात्र हाम्रा नीति सिद्धान्त जनताले नबुझेका मात्र हुन तेतिमात्र हाेर विपक्षीले नकारात्मक टिप्पणी गरिदिदै अलिक जनता अल्मलिएका मात्र हुन । हामी उच्च मनाेवलका साथ सशक्त बनेर खाेटाङलाई हाम्राे गढ किल्ला बनाउन सकिन्छ । तेसकाे जठसुत्र निकै छन्। किनकी हामी अरूकाे भ्रम छरेर हाेइन अाफ्नाे भिजन रिजन सहित देखाएर जनताकाे मन जित्न अब्बल छाैँ । अन्तमा दिदी, हामी जनादेशलाई स्विकार्दै अब नगरकाे समृद्धिकाे लागि प्रतिपक्षकाे भुमिका अहम निर्वाह गर्ने छाैँ । हामी जनताकाे मन जित्ने छाैँ । हाम्राे मुलमर्म र सिद्धान्तले मात्र शिघ्र विकास हुने भएकाेले अब हामी अझ संगठित हुन जरूर छ । हामी सबैलाई हाम्रै शुभकामना !
रूपाकाेट मझुवागढी नगरपालिका १ दिक्तेल, खाेटाङ
स्नातक तह व्यवस्थापन संकाय दाेस्राे वर्ष